Mimoji, wedzera "Favorites" tab ku emoji yako [Jailbreak] | IPhone nhau
Kana isu tasvika iyo Emoji keyboard, iyo yekutanga tab yatinoona ndiyo iine mifananidzo yatiri kushandisa zvakanyanya, asi ko kana izvo zvatiri kuda zviri ponesa yedu inodiwa Emoji kuti uzviwane nekukurumidza? Iyi sarudzo haisipo muiyo iOS keyboard nekukasira asi, pazvinhu zvese, pane Cydia tweak inonzi Mimoji iyo ichatsiva iyo Yakakurumbira tebhu nemaFavorites atinogona kumisikidza isu kufarira.
Chinhu chakashata chandinoona muMimoji ichokwadi icho chinja Yakakurumbira tab ine Favorites pasina sarudzo yekuchengeta zvese. Ini ndinofunga zvingave zvinonyanya kubatsira kana tikakwanisa kuita sarudzo mbiri, kungoitika, nekuti kuwedzera sarudzo hakumborwadzi. Zvimwe izvi zvichawedzerwa mune yemberi shanduro.
Kana iyo tweak yaiswa, isu tichafanirwa kuiudza kuti ndeapi Emoji edu atinofarira. Kuti tiite izvi isu tichaenda kune akajairwa maseturu, isu tichapeta pasi uye tinopinda marongero eMimoji. Pane imwe chete muzvirongwa zvako, tichaita kana kudzima Emoji iyo yatinoda kuoneka mune yeVadikanwi tebhu, iine sarudzo sarudza zvakare ganda reganda tinoda kuti iratidzike uye nekudaro ishandure yero yeruvara, ruvara ruripo seyakajairwa kuti risaenzane chero chairo ganda reganda. Mumarongero, ehe saizvozvo, kune zvekare sarudzo yekumisa nekumisa Mimoji, izvo zvinoita kuti Favorites kana Yakakurumbira tebhu ioneke kana uchiimisa kana kuimisa zvichiteerana.
Mimoji inogona kuve inonakidza tweak kune avo vashandisi vanoshandisa akawanda emamonikisi mukati mezuva rese uye vanoda kuve nemifananidzo chaiyo yaunoda inodzorwa pasina kurega iyo system ichivawedzera ivo pachavo, chimwe chinhu chaunogona zvakare kuita zvisina kujairika pasina kuwedzera iwo aunoda. tinoda chaizvo.
Mutengo: 0,99 $
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Mimoji, wedzera "Favorites" tab ku emoji yako [Jailbreak]
Maitiro ekumisikidza iyo nyowani iOS 9 News app muSpain